Xiriirka Ku saleysan Horumarinta Shaqada | Achieve
Xiriirka Ku saleysan Hormarinta Shaqada (RBPD) wuxuu taageeraa diiradaha waxbaarshada illaa isdhaxgalada hal-ku-halka ee u dhaxeeyo dhaqaatiirta iyo tababarayaasha, la taliyayaasha, ama jaheeyayaasha. Hadafka taageerada noocaan oo shakhsiyadeed waa in lagu wanaajiyo natiijooyinka kobcitaanka ee carruurta iyadoo la kordhinaya aqoonta, xirfadaha, iyo kartida xirfadlayda. Takhasuska RBPD wuxuu siiyaa dhaqaatiirta kartida ku saleysan jaheynta quburaha iyo taageero la habeeyay ee lagu korinayo kobaca xirfada iyo guusha shaqada.
Takhasuska RBPD waxay sameeyaan wax ka badan tallo iyo taageero! Khabiirada waxay kore u qaadaan daryeelka tayada sare leh iyo hababka wax barista ee ku salaysan hababka ugu fiican ee ku salaysan cilmi-baarista iyo istaraatiijiyadaha goobta (CEED, 2016).
Achieve-na waxay ku faraxsanahay in aan fududeyno ansixinta RBPD ee Takhasusateyaalka!
Illaha: Xarunta Waxbarashada Hore iyo Horumarka. (2016, Agoosto). Qaabdhismeedka cilmiga iyo kartida Minnesota ee xiriirka ku saleysan horumarinta xirfada takhasusyada.
Ma daneyneysaa in aad noqotid Taqasuska RBPD ee ay Acheive ansixisay? Heer sare! Tallaabadaada ugu horeyso waa buuxinta dhammaan sharuudaha loo ansixiyay nooca gaarka ah ee RBPD ee aad daneyneysid inaad noqotid.
Qaabdhismeedka Cilmiga iyo Kartida ee Taqasusyada RBPD
Qaabdhismeedka Aqoonta iyo Qibrada Minnesota (KCF) loogu talagalay xiriirka kusalaysan Takhasuuska Horumarinta Xirfadlayaasha ee taageera shaqada takhasusaha RBPD.
Gudbinayo Dhacdooyinka RBPD
Dhaqso Imaanayo! Tani waa jaheyn dhameystiran ee sida loo gudbiyo dhacdada RBPD ay ansixisay.
Child Care Aware ee MN waxay hayaan warbixin badan ee taageerada Taqasuska RBPD sidoo kale sida Buug-yaraha Taqasuska RBPD.
Sidee ayaan ku garanayaa haddii aan u qalmo inaan noqdo Taqasuska RBPD?
Dib-u-eeg RBPD aan hadda kutalino iyo shuruudaha gaarka ah.
Waxaan xiiseynayaa noqoshada Taqasuska RBPD, sidee ayaan u codsadaa?
Fadlan raac tallaabooyinkaan si aad u gudbisid codsiga Takhqasuska RBPD
Hubi inaad u aragto inaad la kulanto shuruudaha taageerada RBPD.
Ku gal Develop si shaksi ahaan.
Boggaada soo koobida, ku dhufo sanduuqa ku xiga Noqo Khabiir RBPD.
Geli warbixintaada badhan walba oo riix Keydi iyo Sii soco illaa codsiga.
Riix Gudbi Codsiga ee bogga ugu dambeeyo ee codsiga.
Noo soo dir waraaqaha gaarka u ah ogolaanshahaaga la doortay si loo buuxiyo codsiga. Iimayl, fakis, ama u soo dir dukumeentigaaga Achieve. Waraaqaha waxaa ku jiro shahaadooyinka tababarka iyo waraaqha waxbarashada. Ka eeg Siyaasadda Dukumintiyada La Aqbali karo wixii macluumaad dheeraad ah.
Fakiska: (877) 379-2467
Boostada: Achieve – Xarunta Horumarinta Xirfada MN
Takhasuska RBPD ee nidaamka la ansixiyay waxay qaadataa illaa lix usbuuc.
Imisa ayay qaadataa ansixinta RBPD?
Waxaan dhameystireynaa codsiga Taqasuskaaga RBPD lix isbuuc gudahood ee helitaanka waraaqaha codsigaaga.
Waxaan xiiseynayaa la shaqeynta Takhqasuska RBPD, sidee ayaan ugu xirma karaa hal?
Fadlan raac tallaabooyinkaan si aad u heshid Taqasuska RBPD:
Gal Develop si shaksi ahaan.
Riix Raadi Tababarka ee godka bidix.
Riix bandhiga Jaheynta Tababarka.
Riix badhanka Taqasuska RBPD. Foomka raadinta ayaa soo baxayo.
Ku raadi magac ahaan/Aqoonsiga, qiimeynta, ogolaanshaha, gobolka ama erayga furaha iyo riix Raadi Taqasuska RBPD.
Riix magaca natiijada wixii warbixin dheeraad ah ee ku saabsan Taqasuska RBPD walba.
La sameeyo xisaabta saacadaha tababaraheyga, la taliyaha, ama jaheeyaha oo dhinaca Xirfada Shaqada?
Haa, xisaabta saacadaha lagu isticmaalay Takhqasuska RBPD ee loo ansixiyay sida saacadaha hourmarinta xirfada la ansixiyay. Saacadahani waxay sii hormarin karaan Qaabbilsan Xirfadda talaabo. Si kastaba, saacadaha loo qeexay sida Caawinta Farsamada ma horumarineyso tallaabadaada Xirfada Shaqada.